साउदीमा चार जना नेपालीमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण/नेपाली दूतावासले के भने त? - Malayakhabar
होम पेज प्रवास विशेष साउदीमा चार जना नेपालीमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण/नेपाली दूतावासले के भने त?
साउदीमा चार जना नेपालीमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण/नेपाली दूतावासले के भने त?
साउदी अरबमा चार जना नेपालीमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखिएको त्यहाँको स्वास्थ्य मन्त्रालयले बिज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै जनाएको छ ।
यस भाइरसको सङ्क्रमणबाट बच्न थप सावधानी अपनाउन मन्त्रालयले नागरिकहरुलाई आग्रह गरेको छ ।
साउदी मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म सङ्क्रमितमध्ये चार सय ८८ जना निको भएका छन् । त्यस्तै आइतबार थप पाँच जनाको ज्यान गएसँगै ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या ३४ पुगेको छ।
साउदी अरबमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण हरेक दिन बढ्दो क्रममा रहेको र नेपाली नागरिकहरुमा पनि सङ्क्रमण देखिएकोले महामारीबाट बच्न सावधानी अपनाउन नेपाली राजदूतावासले अनुरोध गरेको छ । साउदीमा कतिपय नेपालीहरुले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण भइरहेको अवस्थामा पनि काम गरिरहनुपरेको भन्दै टेलिफोन एवं पोस्टमसर्फत गुनासो गरेका छन् । धेरै कम्पनीहरुले अत्यन्त न्यून जनशक्तिमा काम गराइहेका पाइएको छ भने कतिपय पूर्णरुपमा बन्द भएका छन् । अधिकांश कम्पनीहरुले सुरक्षाका अधिकतम उपायहरु अपनाएका जानकारीहरु पनि प्राप्त भएका छन् ।
आफू कार्यरत कम्पनीमा उपलब्ध सङ्क्रमणसम्बन्धी सुरक्षाका सबै उपायहरुलाई अनिवार्य रुपमा उपयोग गर्न र हेलचेक्र्याइँ नगर्न भनिएको छ । सावधानी र सचेतनाका सबै अनुभव र जानकारीहरु जतिसक्दो धेरैजनासम्म पुर्याएर एक अर्कालाई मद्दत गर्न आह्वान गरिएको छ ।
हेर्नुहोस साउदीको रियाद स्थित नेपाली दूतावासले जारी गरेको सूचना ।
अघिल्लो लेख मलेसियमा कोरोन भाइरस: मृत्यु हुनेको संख्या ६१ पुग्यो ।
पछिल्लो लेख चाैतारी मलेसियाको बृहत गजल उत्सव कार्यक्रम काेराेनाकाे कारण स्थगित।